Wararka Maanta: Isniin, Nov 23, 2020-Human Rights Watch oo dowladda ku dhalleecaysay in ay ka gaabisay baaritaanka shaqaalihii caafimaad ee lagu dilay Golalay
Lix bilood kadib. Human Rights ayaa sheegtay baaritaanada dowladda in aysan keenin xarig ama dacwad qaadis, xilli ay qoysaska dhibbanayaasha weli cadaalada sugayaan.
27-kii May abbaarihii 1:30 duhurnimo, dabley hubeysan oo wajiyada soo duubtay ayaa howlwadeenadan ka afduubtay xarun caafimaad oo aan dawli ahayn, oo ku taalay tuulada Gololey, degmada Balcad.
Dhowr goobjoogayaal ayaa sheegay in ragga hubeysnaa - seddex kamid ah ku labisnaayeen dareyska milatariga Soomaaliya, mid kalena uu ku labisnaa dareeska booliska, halka mid kalena uu watay dharka shacabka.
Laetitia Bader, oo ah agaasimaha Geeska Afrika ee Human Rights Watch, ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqday inay culeys weyn saarto maxkamadeynta kuwa mas'uulka ka ah si haboonna u magdhawdo qoysaska dhibanayaasha.
Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda dilka. Kooxda Al-Shabab ayaa beenisay inay wax lug ah ku lahayd arintaasi, sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga ayaa beeniyay eedaymo hordhac ah oo uga imanayay dadka deegaanka.